भारतमा भोलि मतदानः कसले जित्ला चुनाव ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२८ श्रावण २०७७, बुधबार ०२:५८ English
भारतमा लोकसभा निर्वाचनका लागि भोलिदेखि मतदान हुँदैछ । निर्वाचनको परिणामका विषयमा अनेक अड्कलबाजी र चर्चा जारी छ । निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने तर्कहरुले भारतीय अखबारका पाना रंगिएका छन् । टेलिभिजनमा बिहानदेखि साँझसम्मको चर्चा पनि यही छ । तर चुनाव जित्नेको तस्बिर अझै धमिलै छ्, कसैको पक्षमा सङ्लिएको देखिँदैन ।
त्यसैले यी सबै माथिका अवस्था र परिस्थितिहरुको मिहिन विश्लेषण गरी हेर्दा भारतमा अहिलेको सत्ता राजनीतिमा आगामी निर्वाचनले आमूल परिवर्तन ल्याउँछ भन्न सकिँदैन । अहिले जे जस्ता प्रश्न उठेको भए पनि अर्काे नेतृत्वमा पनि भाजपाकै सम्भावना बढी देखिन्छ । तर पनि अहिलेको जस्तो स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि सरकार निर्माण गर्नसक्ने सामान्य बहुमतमा भाजपाको गठबन्धन नै अगाडि देखिन्छ । जनसंख्या र भूगोलकै हिसाबले विश्वको ठूलो प्रजातन्त्र ठानिने भारतमा हुन लागेको यस आमनिर्वाचनको चासो भारतमा मात्र सीमित हुँदैन, यसको हारजितले सिङ्गो दक्षिण एसियालाई नै कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पार्न खोज्दछ । यसकारण पनि भारतको चुनावी चर्चा बढी नै हुने गर्दछ ।
२७ चैत्र २०७५, बुधबार २२:५३ मा प्रकाशित